युक्रेनी महिला सधैं आफ्नो असामान्य उज्ज्वल लागि ज्ञात गरिएको छ स्लाव भाषाहरु उपस्थिति। र यो धेरै मोडेल र Actresses विश्वभरिबाट युक्रेनी जरा छ रूपमा, सहमत गाह्रो छैन। आफ्नो inimitable शोभा वास्तविक लिजेन्ड जाने र भव्यता र कामुकता जानाजानी यो राष्ट्रियता को महिला विवाह गर्न खोज्नुभएको धेरै जो, विश्वव्यापी मानिसहरू पहिचान। सबैभन्दा सुन्दर युक्रेनी महिला - तिनीहरू को हुन्? आफ्नो भाग्य कसरी गरे? र यो उपस्थिति के भूमिका खेलेका?
अफवाहहरु अध्ययन र राय
किन युक्रेनी महिला संसारको सबैभन्दा सुन्दर महिला हुन् बुझ्न सुरु गर्न। र यो वास्तविकता हो। कहिलेकाहीं यो आफ्नो उपस्थिति युरोप, एशिया र अन्य देशहरूमा सराहना कसरी हेर्न, युक्रेन बाट बालिका र महिला हेर्न पर्याप्त छ। साथै, यो नियमित स्वतन्त्र अध्ययन, लोकप्रिय विदेशी संस्करणहरू, को Couturier र शो व्यापार अन्य प्रतिनिधिहरु को परिणाम भन्छन्। उदाहरणका लागि, केही वर्ष अमेरिका मा सबै भन्दा लोकप्रिय पुस्तकहरू एक पहिले सबैभन्दा सुन्दर महिला भनिने पुस्तक प्रकाशित भएको छ "युक्रेन को सबै भन्दा सुन्दर महिला।"
यसबाहेक, क्षेत्र गयो केही अनुसन्धानकर्ताहरूले। तिनीहरूले आफ्नो राय मा, सबै भन्दा सुन्दर युक्रेनी महिला संसारमा बाँचिरहेको शहर निर्धारण गर्न सक्षम थिए। प्रारम्भिक डाटा अनुसार, यो कीव छ। यो विशेषज्ञहरूका अनुसार, यहाँ थियो, र सुंदरियों को सबै भन्दा ठूलो संख्यामा घर हो।
अन्य अध्ययन अनुसार, युक्रेनी महिला एजेन्ट र नयाँ अनुहार को खोज मा Couturier प्रतिनिधिहरूलाई बहुमत कि देश पठाइएको छ को रूप मा, मोडेलिंग व्यापार मा एक अग्रणी स्थिति कब्जा। त्यसैले यी "कालो-browed र सेतो-सामना" यस्तो ठूलो लोकप्रियता को कारण के हो?
कारण, परिणाम र राय
सबैभन्दा सुन्दर विश्वास धेरै विशेषज्ञहरूका अनुसार - युक्रेनी महिला, कारण देश को लामो इतिहास सम्बन्धित छ। युक्रेन एशिया र युरोप को सम्बन्ध मा राम्रो भौगोलिक स्थिति छ भन्ने तथ्यलाई।
यो अक्सर आक्रमण र यायावर जनजाति र विभिन्न मानिसहरूले प्रतिनिधिको कब्जा विषय हो किन भन्ने छ। यी raids को फलस्वरूप, त्यहाँ मिश्रित परिवार छन्। तसर्थ, Tartar, टर्की, मङ्गोलियन, ग्रीक, पोलिस, फारसी र अन्य रगतको नसाहरु युक्रेनी महिला अस्तव्यस्त प्रवाह मिश्रण।
मित्रता, खुलापन र निष्कपटता
तर, सबै भन्दा सुन्दर युक्रेनी महिला कुनै दोष नभएको उपस्थिति मात्र होइन, तर पनि एउटा सजिलो स्वभाव, दया, निष्कपटता र खुलापन प्रख्यात छन्। मोडेल एजेन्सीहरू केही प्रतिनिधिहरु अनुसार, युक्रेनी महिला विशेष स्नेह केही क्रमबद्ध छ। तिनीहरूलाई सबैतिर मा उपस्थित छ: आफ्नो आँखा, demeanor, gait र पनि इशाराहरू मा।
साथै, पहिलो स्थानमा यो राष्ट्रियता धेरै प्रतिनिधिहरु छैन क्यारियर र वित्तीय धन, र परिवार राम्रो-जा राख्न गर्दैन। यस कारण, यूक्रेनियन अक्सर विदेशी नागरिकहरु को पत्नीहरू coveted छन्। निस्सन्देह, युक्रेन महिला त्यहाँ सजिलै उच्च तिर्ने काम र परिवार दुवै संयोजन गर्न सक्छन् गर्नेहरूलाई छन्। तिनीहरूलाई बारेमा र कुरा।
सबैभन्दा सुन्दर युक्रेनी महिला: शीर्ष 50 (मार्च चिसो)
सबैभन्दा सुन्दर र सफल युक्रेनी महिला मध्ये एक टोपी मार्च चिसो को डिजाइनर हुन मानिन्छ। फेशन डिजाइनर बन्ने बाल्यकाल सपना संग मूल Kharkov। एउटै विचार संग, त्यो कला विद्यालयमा भर्ना। तपाईंको भविष्य क्यारियर केटी संस्था को निर्देशक गर्न व्यवस्थित अन्त राख्न। शुद्ध मौका द्वारा डिजाइनर तिनीहरूले अधिकारी देखे जहाँ स्कूल मा स्केचहरू, बिर्सन्छन्। उहाँले पनि विद्यार्थी नाजुक प्रतिभाशाली विजार्ड टोपी मा छलफल भएको छ।
आज मार्ता को युक्रेनमा र संसारमा लोकप्रिय र होनहार डिजाइनर छ। त्यो शो व्यापार को घरेलू र विदेशी कलाकार टोपी sews। उनको टोपी आफ्नो वस्त्र लाइन को लागि डिजाइनर किनेको मोडेल, टिभी उपस्थापक, businesswomen र राजनीतिज्ञ छन्। तारकीय ग्राहकहरु बीच मार्था अभिनेता एन्ड्रयू Danilko (Verka Serduchka को छवि), Natasha Koroleva, टीना Karol, पूरा गर्न सक्छन् Katya Osadchaya, अल्ला Pugacheva, लारा फ्याबियनको, Svetlana Volnova, बारबरा Brylska। तिनीहरूलाई बीच त्यहाँ अन्य छन् प्रसिद्ध (सुन्दर) युक्रेनी।
आकर्षक र unflappable Nadezhda Vasina
एक उज्ज्वल र स्मरणीय उपस्थिति संग दोस्रो सर्वाधिक लोकप्रिय युक्रेनी केटी एक व्यायाम गर्ने व्यक्ति Nadezhda Vasina छ। त्यो जुलाई 1989 मा कीव महिमाको शहर मा जन्म भएको थियो। देखि बाल्यकाल, खेल को रुचाउनु र सक्रिय जीवन शैली नेतृत्व। त्यसैले, तीन उमेर देखि त्यो आंकडा स्केटिङ, नृत्य र पौडी मा लगे थियो। स्कूल मा अध्ययन गर्दा जिम मा एक सर्कल मा भर्ना।
आशा 12 हुँदा त्यो राष्ट्रिय युक्रेनी टोली व्यायाम गर्न निमन्त्रणा गरिएको थियो। र एक वर्ष पछि त्यो देश को खेल को सम्मान मास्टर भयो, र समय को नै अवधिमा "खेल को अन्तर्राष्ट्रिय मास्टर" शीर्षक हासिल गरेको छ। Vasina पछि युरोपियन च्याम्पियनसिपलाई, विश्व Universiade र gimnaziade मा बोल्न पर्याप्त भाग्यवान्, विश्व कप र अन्य मानार्थ च्याम्पियनशिप र प्रतियोगिताहरु मा। पछि वर्ष मा त्यो एउटा अभिनेत्री रूपमा आफ्नो हात प्रयास, retires र आफ्नो शो आयोजना गरिएको छ। तिनीहरू यहाँ छन् - सबैभन्दा सुन्दर युक्रेनी महिला।
बेजोड र आकर्षक Ani Lorak
हाम्रो स्तर मा तेस्रो युक्रेनी सौन्दर्य - एक लोकप्रिय पप गायक, मोडेल, गीतकार, टेलिभिजन प्रस्तोता र अभिनेत्री Ani Lorak (Karolina Quek)। त्यो एक गरिब परिवारमा, एक सानो प्रान्तीय Kitsman को टाउन Chernivtsi क्षेत्र मा स्थित मा जन्म भएको थियो। उहाँले Sadgorskiy बोर्डिङ स्कूलमा आफ्ना भाइहरूलाई संग भयो। एक प्रारम्भिक उमेर देखि त्यो एक गायक हुन चाहन्थे। र उनको सपना त्यो गीत "Primrose" जहाँ यो निर्माता Yuriem Falesoy द्वारा देख्यो थियो प्रतियोगिता, जित्यो गर्दा, 1992 मा साँचो आए। यो बिन्दु बाट यो धेरै वर्ष लाग्यो। आज, कैरोलिना - एक सफल व्यापारी महिला, एक प्रसिद्ध युक्रेनी गायक, मायालु पत्नी र आमा।
Liberated र मुखर Daria Astafieva
को युक्रेनी सबैभन्दा सुन्दर (फोटो भन्ने तथ्यलाई दारी Astafevoy यो कथन को एक प्रत्यक्ष पुष्टि छ), र सहभागी अनुपम उपस्थिति «Nikita» दारी Astafevoy समूह बताउँछ। म अगस्ट 1985 मा यो बोल्ड र सेक्सी केटी आउनुभयो। उनको गृहनगर - Ordzhonikidze, को निप्रपेट्रोस क्षेत्र मा स्थित।
तुरुन्त स्कूल पछि Astafieva म गायन मा थप रुचि छ भनेर बुझे जहाँ निर्देशन विभाग, प्रविष्ट गर्नुभयो। तिनीहरूले पेशेवर यसलाई संलग्न भए। एक सानो पछि, Dasha स्थानीय संगीत प्रतियोगिताहरु, जहाँ धेरै पटक त्यो मात्र पुरस्कार जीत व्यवस्थित भाग निर्णय, तर पनि निर्माता संग एक होनहार जानकारी छ Yuriem Nikitinym।
अझै पनि पछि Astafevu को मोडेलिंग व्यापार, अक्सर सबैभन्दा सुन्दर युक्रेनी महिला फस्न जो देख्यो (माथि, यस लेखमा प्रस्तुत ठीक भनेर देखाउँछ)। उहाँले यो ध्यान आकर्षित गरे, र वयस्क पत्रिका (प्लेबय) Hyu Hefner को संस्थापक। क्षणमा, त्यो चित्रकला उठाए, र लोकप्रिय घरेलू र विदेशी फोटोग्राफर लागि कार्य जारी छ।
नाजुक र परिष्कृत वेरा Brezhnev
पाँचौं युक्रेनी, ध्यान लायकको वेरा Kiperman (née Galushka), राम्रो वेरा Brezhnev रूपमा ज्ञात छ। फेब्रुअरी 1982 मा यो अचम्मलाग्दा र लामो-haired गोरा जन्म। उनको गृहनगर को Dnepropetrovsk क्षेत्र को क्षेत्रमा, निप्रपेट्रोस छ।
वेरा, यस समयमा माध्यमिक विद्यालय नम्बर 41. मा अध्ययन त्यो, विदेशी भाषा द्वारा मोहित थियो बास्केटबल, ताल कसरत, ह्यान्डबल र कराते खेल्न। एक वकील बन्ने आफ्नो बाल्यकाल सपना देखि। तर भाग्य अन्यथा आदेश, र त्यो अभिनय सफलतापूर्वक महारत, एक गायक भए।
अब त्यो, संयुक्त राष्ट्र को लागि एक सद्भावना राजदूत विभिन्न प्रचार फोटो सत्रमा भाग लिन्छ, आमा र पत्नी को भूमिका संग copes। साथै, अद्वितीय उपस्थिति को लागि धन्यवाद, Brezhnev अक्सर विभिन्न कार्यक्रमहरू र मूल्यांकन को हेरोइन बन्नेछ। , सबै भन्दा लोकप्रिय युक्रेनी प्रकाशनहरू को एक द्वारा आयोजित: उदाहरणका लागि, हालसालै यो "शीर्ष 30 सबैभन्दा सुन्दर युक्रेनी महिला" को सूचीमा पायो छ। खैर, यो बाहेक, यो मूल्याङ्कन पनि यस्तो युक्रेनी सेलिब्रेटीहरू थिए:
अन्ना Sedokova र अरूलाई।
यस प्रतियोगिता को विजेता "मिस इन्टरनेट" Irina Zhuravskaya
एक समयमा "मिस इन्टरनेट" को शीर्षक प्राप्त जो छैटौं सौन्दर्य, Irina Zhuravskaya भयो। त्यो 1990 मा कीव मा जन्म भएको थियो। समयमा त्यो लस एन्जलसका स्कूल अभिनय स्नातक। एकै समयमा त्यो मोडेलिंग व्यापार रुचि भयो। संयोगले त्यो द्वारा कर्मचारीहरु Karin MMG एजेन्सी पत्ता र उहाँलाई निमन्त्रणा गरिएको थियो।
पछि राम्रो सफलतापूर्वक परीक्षा पार गरेको छ र Karpenko Kary थियेटर संस्थान को संकाय प्रविष्ट गर्नुभयो। आफ्नो पढाई संग, Irina फोटो मार मा भाग र एक कीव टेलिभिजन लागि मौसम पूर्वानुमान नेतृत्व। त्यो उपाध्यक्ष-मिस को मानार्थ शीर्षक प्राप्त जहाँ सौन्दर्य प्रतियोगिता "मिस Donbass ओपन-2007", समयमा Zhuravskaya प्रसिद्ध भए। पनि प्रस्तुत गरेका थिए जो र अन्य सबै भन्दा सुन्दर युक्रेनी महिला (शीर्ष 35) - अझै पनि पछि, त्यो राष्ट्रिय प्रतियोगिता "2008 मिस युक्रेन" जित्यो।
Alena Scherban - एक विश्वव्यापी प्रतिष्ठा संग शीर्ष मोडेल
हाम्रो मिनी-दर्जा मा सातौं स्थान लिए जो अर्को केटी, Dnepropetrovsk Alena Scherban को एक मूल। Belle डिसेम्बर 1983 मा जन्म भएको थियो। त्यो एक साधारण उच्च विद्यालय र खेल, नृत्य मा अध्ययन। केही बिन्दुमा, एलन मा किनभने के विभिन्न एजेन्सीहरू सम्पर्क गर्न थाले को विज्ञापन र मोडेलिंग क्यारियर रुचि भयो। एक चमत्कार भयो। मानिस मात्र होइन देख्यो, तर पनि मिस 2000 को आदरणीय शीर्ष 10 को योगदान गरे।
अझै पनि पछि, एलन युक्रेन-1999 को प्रतियोगिता फोर्ड सुपर मोडेल मा एक पहिरो विजय जित्यो। त्यो "मिस Dnepropetrovsk 2000" र "मिस युक्रेन 2000" को शीर्षक सम्मानित पछि। एकै समयमा यो WWW विश्व व्यापी महिला संग एक दीर्घकालिक सम्झौता र अभिजात वर्ग मिलान संग एक सम्झौता हस्ताक्षर भएको छ। Alena पछि - लोकप्रिय विदेशी र घरेलू पत्रिकाबाट को कवर लागि फिलिम प्रसिद्ध विदेशी डिजाइनर, को शो मा सहभागिता, क्लिप जी Depardieu भाग। उनको नाम शीर्ष 50 सबैभन्दा सुन्दर र युक्रेन को शीर्ष 100 भन्दा प्रभावशाली महिला समावेश थियो।
मोडेल र टिभीमा प्रस्तोता अलेक्जेन्डर Nikolaenko
आठौं स्थानमा हाम्रो स्तर मा, शायद, अलेक्जेन्डर Nikolaenko दिनुहोस्। त्यो हंगेरी मा जन्म भएको थियो भन्ने तथ्यलाई बावजुद, यो बलियो युक्रेनी जरा छ। त्यसैले मैले युक्रेन आउँछन्। आफ्नो उच्च शिक्षा त्यो "नागरिक कानून र उद्यमशीलता" को दिशा मा एक डिग्री प्राप्त व्यवस्थाको ओडेसा राष्ट्रीय एकेडेमी मा प्राप्त।
प्रारम्भिक 1996 मा, त्यो ओडेसा एजेन्सी मोडेल Savrox मोडेल, उनको क्यारियर मा एक प्रतिवेदन चरण भएको छ जो आए। र "मिस युक्रेन - 2011" - यो पछि "ओडेसा सर्वश्रेष्ठ मोडेल 2001", "2001 मिस अमेरिकी सपना दुनिया" जित्यो थियो। प्रारम्भिक 2001 मा, सिकन्दरले "मिस" मा दुनिया मा शीर्ष 10 सबैभन्दा सुन्दर महिला मा पायो। क्षणमा, त्यो एक अमेरिकी अरबपति को पत्नी छ र संयुक्त राज्य अमेरिका मा बसोबास।
तपाईं धेरै भएको युक्रेनमा, सुन्दर महिला र बालिका देख्न सक्नुहुन्छ रूपमा। यसबाहेक, सबैभन्दा सुन्दर युक्रेनी महिला - देश को राष्ट्रिय सम्पदा।
डगलस Engelbart - कम्प्युटर माउस को आविष्कारक
क्रिश्चियन Serratos: क्यारियर अभिनेत्री
Alina Kovalevskaya - केटी-पुतली
आदम जी Sevani - एक जवान हलिउड स्टार
Tatyana Vasilevna Doronina: जीवन र जीवनी को तथ्य
स्याउ मा भिटामिन - सबै छील छ
आत्म-अभिव्यक्ति फारम रूपमा मानिसहरू लागि कंगन
को Alta नदी 1068 साल को लडाई: कारण र परिणाम
फूल मा एलर्जी
साहित्य र यसको विशेषताहरु मा रियलिटी
35 हप्ता गर्भवती: सुरु प्रसब लागि तयार